Myanmar Pushes Implementation of Tamu Border Trade Zone | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Pushes Implementation of Tamu Border Trade Zone
Myanmar Pushes Implementation of Tamu Border Trade Zone
Dr. Than Myint, Union Minister of the Ministry of Commerce, said that the government will form another task force in addition to the existing central committee and two working committees to push the implementation of Tamu Border Tade Zone at Myanmar-India border.
The city Tamu located near the Myanmar-India border has good potential for bilateral trade. Therefore, the union government of Myanmar, in collaboration with the government of the Sagaing Region, is trying to buildaborder trade zone to improve trade with India.
The Tamu border trade post is the biggest among three posts at Myanmar-India trade posts andatrade zone is needed to improve bilateral trade.
Bilateral trade between Myanmar and India in the 2019-2020 Fiscal Year has reached $36.963 million.
တမူးကုန်သွယ်ရေးဇုန် တည်ဆောက်ရေးအတွက် လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသည့် ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီနှစ်ရပ်အပြင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က အနီးကပ်ကြီးကြပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ပြောသည်။ တမူးကုန်သွယ်ရေးဇုန် တည်ဆောက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
တမူးမြို့သည် အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဒေသဖြစ်ရာ ကုန်သွယ်ဆက်ဆံမှု အလားအလာများ ကောင်းမွန်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် တမူးကုန်သွယ်ရေးဇုန်အား တည်ထောင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ဖြစ်ကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ပူးပေါင်း၍အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်ကပြောဆိုခဲ့သည်။
တမူးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းသည် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန် သွယ်ရေးစခန်း သုံးခုအနက်အ ကြီးဆုံး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဖြစ်သည်ကာ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးဇုံ တည်ဆောက်ရန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ၂၀၂၀ မြန်မာ အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု မှာ စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၆ ဒသမ ၉၆၃ သန်းရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Previous articleSamanea Yangon Market to Launch in November
Next articleThe US Interested to Increase Economic Cooperation with Myanmar